Ụbọchị My Pet » Ịchọta A Pet ekiri mgbe nile
emelitere ikpeazụ: Jun. 01 2020 | 3 min agụ
The oge ọzọ ị pụọ, ma ọ bụ maka azụmahịa ma ọ bụ obi ụtọ, ị pụrụ iji tụlee ego a Pita na-anọdụ na-abịa n'ime ụlọ gị na-elekọta gị anu ulo. Ọrụ ọrụ nke a ọkachamara Pita ekiri mgbe nile ga-ekwe ka gị Pita na-anọ ala n'ụlọ ya, na-enye gị udo nke uche maara na ọ bụ ihe dị mma na ike aka, na-eme ka i si na-enwe ịdabere na enyi ma ọ bụ ndị ikwu. Tupu ị nyefee gị mkpịsị ugodi na-efegharị goodbye ka rover na N'ụbọchị nke abụọ ezie, na-ewe oge iji kụziere onwe gị banyere Pita sitters na ọrụ ha na-enye. N'ajụjụ ọnụ a ole na ole Pita sitters, ga-esi mara ha a bit, na-ajụ ajụjụ. Chọpụta ihe ahụmahụ ha, otú ugboro ugboro na ha ga-ileta gị anu ulo, otú oge nleta ikpeazụ, ihe ha ga-eme mgbe gị na anu ulo, otú ha ga-aka Mberede, na ụgwọ. Ke adianade n'ozuzu ọmụma banyere ọrụ ha, ị chọrọ ekpuchi a ole na ole dị oké mkpa isi, dị ka e depụtara n'okpuru ebe a.
– Insurance na / ma ọ bụ bonding: Nke a agaghị gbochie ihe mberede si na-eme ma ọ ga-echebe gị na Pita ekiri mgbe nile ruo n'ókè ụfọdụ kwesịrị a mishap ime. Ọtụtụ naanị proprietors na-insured, na ọtụtụ ọrụ na-eji Pita sitters na-bonded na insured. Ọ bụ ezi echiche na-arịọ maka ihe àmà nke mkpuchi.
– Pet mberede ndokwa: Ọ bụrụ na gị Pita na-aghọ ọrịa gị mgbe ị na pụọ, ọ ga-adị mkpa ka gị Pita ekiri mgbe nile mara ihe jikoro ma ọ bụrụ na ị na-apụghị ruru. Ọ ma ọ bụ o kwesịrị inwe gị pụọ si kọntaktị, na ụdị ọgwụgwọ na / ma ọ bụ ngụkọta ị ikike ma ọ bụrụ na ị na-apụghị kpọtụụrụ.
– Pet ekiri mgbe mberede usoro: Rịọ ihe jikoro ga-ma ọ bụrụ na gị Pita ekiri mgbe nile na-aghọ ọrịa ma bụ enweghị ike na-elekọta gị anu ulo, ma ọ bụrụ na ọ bụ ya na-enweghị ike na-ebe obibi gị ruru inclement weather, ma ọ bụ na ihe omume nke a ọdachi.
– Key nche: Jụọ otú isi ga-mata na echekwara. Igodo ekwesịghị-mmasị ọ bụla gị na aha ma ọ bụ adreesị na ya, na mgbe anaghị eji, kwesịrị ha ga-nọ ná nchebe a kpọchiri mma ma ọ bụ ndị ọzọ ala Herọd. Ọtụtụ Pita nọ ọdụ ulo oru ga-enye aka na-gị isi ga-eme n'ọdịnihu Pita nọ ọdụ ọrụ.
– Contracts na ụdị ndị ọzọ: Jide n'aka na gị Pita ekiri mgbe nile na-enye gị a dere nkwekọrịta ịmata ihe ndị dị ka ụbọchị, ugboro, ọrụ kwekọrịtara, mberede usoro, isi nche, udu, wdg.
– References: Jụọ n'ihi aha na ozi ịkpọtụrụ ole na ole ndị ahịa na-. Were oge gwa ndị a ndị mmadụ na-ajụ banyere ahụmahụ ndị ha nwere na ma ma ọ bụ ha ga-iku ahụ Pita ekiri mgbe ọzọ. Ọtụtụ Pita sitters na-enwe obi ụtọ na-enye zoro site n'aka ndị ọzọ Pita na-elekọta ndị ọkachamara dị ka veterinarians, groomers, ma ọ bụ na-enye ọzụzụ.
– Pita mbipụta: Agwa gị gaje Pita ekiri mgbe nile nke ọ bụla nsogbu ahụ ike, akparamàgwà mbipụta, ma ọ bụ ndị ọzọ dị mkpa ihe banyere gị anu ulo. Inye gị Pita ekiri mgbe nile dị ka ihe ọmụma dị ukwuu dị ka ị pụrụ banyere gị Pita ga-eme ya na-enye ihe kasị mma na-elekọta na o kwere omume.
– Home mbipụta: Dị ka Pita mbipụta, ijide n'aka na-agwa gị Pita ekiri mgbe nile nke ọ bụla oddities banyere n'ụlọ gị gị na nke ahụ nwere ike ibilite ị na-anọghị (ụlọ mposi na ọtọde, ụzọ na-adịghị igbachi n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nche Mkpu, wdg).
N'ihi na Pita nọ ọdụ bụ onye ọrụ, gị na Pita mkpa ịdị na-ọma na onye ị na-agba n'ime ụlọ gị. Lee maka a n'echiche nke professionalism na onye aka, ijide n'aka na--gaa na akaụntụ gị gootu mmetụta, ma na-edebe gị Pita si meghachi omume na Pita ekiri mgbe ị N'ajụjụ ọnụ. Na obere bit nke nkwadebe na nchoputa, gị Pita ga-enwe ike ịnọ n'enweghị ya n'ụlọ mgbe ị na pụọ, na ga-anọ ebe ịnụ ọkụ n'obi na-ekele gị na na ịhụnanya mgbe ị laghachiri.